Gudiga dib u habeynta & diiwaan galinta Ciidanka Puntland oo shaqo ka wada Gobolka Mudug
August 26, 2020 - Written by Editor
Gaalkacyo:-Hawihii Dib uhabaynta & Diiwaan galinta ciidanka dowlada Puntland ayaa maanta si rasmi ah uga furmay xerada ciidanka ee Godod oo qiyaas ahaan 30Km dhanka bari kaga beegan magaalada Gaalkacyo.
Gudiga dib uhabeynta & diiwaan galinta Ciidanka dowlada Puntland oo ay weheliyo Xildhibaan Fuaad abshir adeer oo katirsan baarlamaanka dowlada Puntland, maamulka Degmada Gaalkacyo & taliska guud ee ciidanka booliska dowlada Puntland ayaa si toosa ula socday habka shaqada ay usocoto.
Gudoomiyaha Gudiga Dib uhabaynta ciidanka dowlada Puntland ahna wasiirka maaliyada xasan shire abgaal oo ciidanka la hadlay ayaa sheegey in diiwan galintu ay tahay in la xareeyo xogta askariga oo dhamaystiran si u galo diiwaanka mushaarka oo askari walba taleefankiisa ugu soo dhacaysa.
Waxaa kale uu sheegey inuusan jirin askari laga tagayo mid walaba uu diiwaan galinta marayo laguna diiwaan galinayo nooca uu yahay marka diiwaan galinta dhamaatana ciidanka tababar lagalin doono.
Dhinaca kale Gudiga Dib uhabaynta ciidanka dowlada Puntland ayaa intii ay kusugnaayeen deegaanka Godod waxaa ay la kulmeen Maamulka degmada Towfiiq ee gobolka mudug,Taliska ciidanka Daraawiiishta & Taliyaha booliska degmada towfiiq.
Masuuliyiinta degmada towfiiq ayaa Gudiga Dib uhabaynta ciidanka dowlada Puntland & masuuliyiinta la socday kala hadlay baahiyo ka jira deegaanka waxaana laysku afgartay in baahiyaas dowlada Puntland ay deg deg u dabooli doonto hadana ay ku howlantahay.
Xafiiska Warfaafinta Wasaaradda Amniga iyo DDR Dawladda Puntland.
246,850 Spam Comments Blocked so far by Spam Free Wordpress